ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၃၇ - MoeMaKa Media
Home / Community / Coronavirus / Experience / Khun Sai / ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၃၇
ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၃၇
Community, Coronavirus, Experience, Khun Sai
(မိုးမခ) မေ ၃၊ ၂၀၂၀
လော့ဒေါင်း မချတဲ့ ဆွီဒင် နိုင်ငံနား မှာ Nordic neighbors ဆိုပြီး အိမ်နီးချင်း ( လော့ဒေါင်း ချတဲ့) သုံးနိုင်ငံ ဒိန်းမတ် နော်ဝေ ဖင်လန် ရှိပါတယ်။ ဆွီဒင် က အခုထိ ၂၆၅၃ ယောက်သေပြီးချိန် ဒိန်းမတ် ၄၆၀။ နော်ဝေ ၂၁၀ ။ ဖင်လန် ၂၁၈ ယောက်ပဲ သေကြတာ ဆိုတော့ ဆွီဒင်က ဒိန်းမတ်ထက် ၅ ဆသေတယ် ။ နော်ဝေ နဲ့ ဖင်လန်ထက် ၁၂ ဆ သေတဲ့ သဘောပါ ။ ဒီလိုပဲဆက် လွှတ်ထားမယ်။ လူတွေ ခပ်ပူးပူးဆက် နေကြမယ်ဆိုရင် ကိုဗစ် ဆပွါး ကူးစက်နှုန်း နဲ့ သေနှုန်းတွေ ဆက် တက်လာပါလိမ့်မယ်။ လူဦးရေ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ကူးပြီး ချိန် အထိ ရောက်သွားမှသာ အုပ်စုခုခံအား ( Herd Immunity ) ရလာမှာ ဆိုတော့ အုပ်စု ခုခံအား ရချိန်ရောက်ရင် လူ ဘယ်နှစ်ယောက် ဖိတ်စင်ပြီးဖြစ်မလဲ ခန့်မှန်းရတာ ကျနော့် အတွက်တော့ အတော် စိတ်မသက်သာ စရာပါ ။
နယူးဇီလန်( New Zeland ) တိုင်းပြည် ကတော့ ကိုဗစ်ကို တလ အတွင်း သမရိုးကျ နည်း ကမ္ဘာဦးနည်း တွင်း အောင်းနည်းနဲ့ အနိုင်ယူ အပြတ် ချိုးနှိမ်လိုက်နိုင် တဲ့ တိုင်းပြည်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ ဝန်ကြီးချုပ်မ ဂျက်ဆီကာ အာဒန်က လူကို ပထမထားကြ မယ် ။ စီးပွါးရေးကိုနောက်မှာထားမယ်။ လူကို ကာကွယ်မယ် ။ ကိုဗစ်ကို အပြတ်ရှင်းမယ်( elimination) ။ သက်သာအောင်လုပ်နည်း ( mitigation ) ကို မစဥ်းစားဘူး ။( တနည်း အမေရိကန် - အင်္ဂလန် လို မစဥ်းစားဘူး ) မတ်လ ၁၉ မှာ နယ်စပ်တွေ ပိတ်တယ်။ မတ်လ ၂၄ မှာ ကျောင်းတွေ ကော်ဖီဆိုင်နဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေ ပိတ်တယ်။ မတ် ၂၆ မှာ လုံးဝ အသွားအလာအကုန် ပိတ် လော့ဒေါင်းပြင်းပြင်း ချတယ်။ အခု ဧပြီ ၂၇မှာ ကူးစက်မှုတွေ ရပ်ပါတယ်။ ( မေ၁ စာရင်း ကူးစက်မှု ၁၁၃၂ နဲ့ သေဆုံး ၁၉ ) ဆို တော့ ပိတ်ထားတာတွေ ကို ပြန်ဖြေလျော့နေပါပြီ။ စီးပွါးရေးတွေပြန်စနိုင်ပြီ ။ ဒါပေမယ့် လူတွေကို သတိကြီးကြီးထားဘို့ လက်ပွန်းတတီး မနေကြဘို့ ဆက်သတိပေးထားပါတယ်။( We are opening up the economy, but we're not opening up people's social lives )
ယူကေ အဖြစ် က အဆိုးဆုံး သေနှုန်းအမြင့်ဆုံး ကာလ - peak ကို ကျော်လာပြီလို့ ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်က မနေ့က ပြောပေမယ့် တရက်သေနှုန်း မနေ့က ၇၃၉ ။ တနေ့က ၆၀၀ ကျော်။ အသေအပျောက် များနေဆဲပါ ။ ခုနှုန်းအတိုင်းသွားရင် မကြာခင် အီတလီကို ကျော်တက်သွားပြီး ဥရောပမှာ အဖိတ်အစင် အများဆုံး ဗိုလ်စွဲမယ့် နိုင်ငံ ဖြစ်လာဘို့ ရှိပါ တယ်။ ဆေးသိပ္ပံ အရ ရှင်းပြတဲ့ အခါ အခု ကိုဗစ် ကူးစက်နိုင်မှု နှုန်းဟာ တစ် အောက်ကို ရောက်သွားပြီ ။ ( အရင် ကူးစက်နှုန်းက ၃ ဆိုတော့ ၃ ဆ ပွါးနေခဲ့ တာပေါ့) အခုလို ကူးစက်နှုန်း တစ်အောက်ကို ကျသွားရင်ထိန်းချုပ်လို့ ရလာပါ မယ် လို့ ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်ကတော့ ပြောတယ်။
တရက်ကို စစ်ဆေးပေးနိုင်တဲ့ နှုန်းကလဲ လူ တသိန်း အထိ စစ်ပေးနိုင်နေ ပြီ။ စစ်တပ်က ရွေ့လျား တပ်ဖွဲ့ ၇၀ ပါဝင် ကူညီစစ်ဆေးပေးတယ်။ စစ်ဆေးတဲ့ ဌါန ၄၈ နေရာဖွင့်ထားပေး တယ်။ ဧရာမ စင်တာကြီး ၃ခုလဲ ဖွင့်ထားပေးတယ်။
လော့ဒေါင်းချတာ ၂ပတ် ၃ပတ်နောက်ကျတာရဲ့ အကျိုးဆက်ကို ပေးဆပ်ကြရတာလို့ ဆိုပါတယ်။ အခု ကူးစက်နေမှု တသိန်း ၇သောင်းကျော် ရှိနေတာမို့ ထိန်းချုပ်ရ မလွယ်လှပါဘူး။ ကျန်းမာရေးဌါနလဲ အထူးဖိစီးပင်ပန်း နေပါတယ် ။ စီးပွါးရေးကလဲ ကြာကြာ ပိတ်ထားလို့ မရတာမို့ လာမယ့် အပတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ စီးပွါးရေးကို ပြန်ဖွင့်ကြမယ်ဆိုတဲ့ စီမံချက်လမ်းကြောင်းများ ကို အစိုးရက လူထုထံ ချပြမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဗြိတိသျှလေကြောင်းလိုင်း British Airway က ဝန်ထမ်း ၁သောင်း ၂ထောင်ကို လျော်ကြေးပေး အနားပေးဘို့လုပ်နေ။ လေယာဥ်တွေအားလုံး နားနေရတော့ လေကြောင်းလိုင်းတွေလဲ မခံနိုင်ပါဘူး။ တန်ဘိုးသင့်လေကြောင်းလိုင်း ကြီးတခုဖြစ်တဲ့ ရိုင်ယန်အဲယား ( Ryanair) ကလဲ ဝန်ထမ်း ၃၀၀၀ ကို အနားပေးရပါတော့မယ်။ လန်ဒန် မြေအောက်ရထား လူစီးနှုန်း ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျသွား။ ဘစ်ကားက ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းကျသွားတာမို့ ဝန်ထမ်း တွေလျှော့ ချ နေပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာဒေတာ တွေ ကတော့ အရက်ရောင်းရနှုန်း မှာ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းတက်လာပြီး အဝတ်အစား ရောင်းရနှုန်း ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျသွားတယ်ဆိုတဲ့ အချက်အလက်မျိုး။ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်နှုန်းတွေ တက် နေပြီး ရာဇဝတ်ဖြစ်မှု နည်း။ မုဒိမ်းမှု မရှိသလောက်နဲ သွားတာမျိုး ။
ဂျာမဏီက ကိုဗစ် ဆက်လက်ဖြစ်ပွါးမှု နှုန်းကို သေချာ တွက်ချက်ပြီး အခု အနည်းငယ်ဖြေလျော့ထားတာကို မေလ ၁၀ ရက်အထိ ဆက် စောင့်ကြည့်သွားဘို့ ရှိပါတယ်။ ဟော်တယ်လို hospitality businesses လုပ်ငန်းသမားတွေက လုပ်ငန်းတွေ ပြန်စ ပြန်ဖွင့်ချင်နေတော့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။
အမေရိကန်က ကိုဗစ် ရဲ့ ဗျူဟာအောက်မှာ အလူးအလဲ အထိနာဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပြီး သမတကြီးထရမ့် မျက်နှာ မကောင်းပါ ။ ကိုဗစ်ဟာ ဝူဟန်ဓါတ်ခွဲခန်းက လွတ်ထွက်လာတာဆိုတဲ့ သီအိုရီနဲ့ တရုတ်ကို စွပ်စွဲနေပေမယ့် အချက်အလက်ကိုတော့ တိတိကျကျ သူ ထုတ်မပြနိုင်သေးပါဘူး။ တရုတ်ဟာ သူ့ကို ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရှုံးစေချင်နေတယ်လို့ ပြော- သူများ တရားခံ ရှာနေရတဲ့အနေအထား ။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လူက ဖန်တီးထားတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေး အေဂျင်စီ က ပယ်ထား ပြီး ဗိုင်းရပ်လာရာ ဇာတိ အတိအကျကို ဆက် စုံစမ်းနေတုန်းလို့ ပြောပါတယ်။ တရုတ်ကလဲ သူတို့က ကိုဗစ်ကို ထုတ်လုပ်လိုက် တာ မဟုတ်ဘူးလို့ အပြတ်ငြင်းထားပြီး ကိုဗစ် ဗိုင်းယပ်စ်ပိုး ဘယ်ကရောက်လာသလဲ ။ တိရိစ္ဆာန်တွေဆီက ခုန်ကူးလာတာ ဟုတ်မဟုတ် နိုင်ငံတကာ က လာစုံစမ်းကြပါလို့ သူ့ဆီကို ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် ။ အမေရိကန်ဟာ အခုတော့ ဥပဒေသမားတွေ -ကျန်းမာရေး အရာရှိတွေ -အလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေ နဲ့ အတိုက်အခံ လုပ်ပြီး သူ့ စီးပွါးရေးကို ပြန်အသက်သွင်းဘို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ တရက်ထဲ ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ဝူဟန်ဗိုင်းယပ်စ် ပေါ့စတစ် ကို စတွေ့ -စ ခြေရာခံနိုင်တဲ့ တောင်ကိုရီးယားကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ ၁၅ရက်နေ့က လူ ၂၉သန်း ပါဝင် မဲပေးတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို အောင်အောင်မြင်မြင် ( ကိုဗစ် မကူးစက်စေပဲ ) - လုပ်သွားခဲ့ကြပါပြီ။ အခု ပြည်တွင်းမှာ အချင်းချင်းကူးစက်တာလဲ ဇီးရိုး ။ ပြည်ပက ပြန်လာသူဆီကတွေ့တာလောက်ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး အန်တိုနီရို ဂူတာရက်စ်က - တောင် ကိုရီးယားကို နမူနာ ယူကြဘို့ ပြောပါတယ်။ ၃လအကြာ ကိုဗစ်စစ်ပွဲမှာ တောင်ကိုရီးယားဟာ တနိုင်ငံလုံး ကူးစက်မှု ၁၀၇၈၀ ။ သေဆုံး ၂၅၀ လောက် နဲ့ ကိုဗစ် ကို အပြတ် ချေမှုန်း ပြီး အခု ကိုဗစ်ဌါနချုပ် မှာ တောင် ကိုရီးယား အလံကို လွှင့်တင် ထားပါတယ်။
ကပ်ရက် က ဂျပန်မှာတော့ တိုင်းပြည်အရေးပေါ်အခြေအနေ တလ တိုးမြင့်ထားရပါတယ်။ ကူးစက်မှု တသောင်း ၄ထောင်ကျော် သေဆုံးမှု ၄၆၆ ။
အိန္ဒိယ ရဲ့ ကူးစက်မှုကလဲ တရိပ်ရိပ်တက်လာနေပြီး လူထု ငတ်မွတ်မှုကလဲ တနေ့တခြား ပိုပိုလာတာမို့ ကိုဗစ်က စိတ်ကြိုက် စစ်ကစားပြီး ချေမှုန်းတာကို ခံရမယ့် စစ်မြေပြင်တခုလို ဖြစ်လာနေသလား ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ် နာရင်ဒြာ မိုဒီ အစိုးရ လော့ဒေါင်း ဆက်ချထားမလား။ လူထုကို ကိုဗစ် အကူးခံပြီး စီးပွါးရေးလုပ်မလား သူတို့ မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးပါဘူး။
တောင်အာဖရိက အစိုးရ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု ကိုလဲ ချီးကျူးကြပါတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့ လူတန်းစားတွေများပြား လူနေမှု ကြပ်တည်းတဲ့တိုင်းပြည်မျိုး ကလဲ ကိုဗစ်အကြိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် မတ်လ ၂၇ ရက် မှာ ပေါ့စတစ် ၄၀၂ ယောက် တွေ့ ကတည်းက ( သေသူမရှိသေးပေမယ့် )တိုင်းပြည်ကို လော့ဒေါင်းချလိုက်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့တိုင်းပြည် က ဆင်းရဲတယ်။ အရမ်းဖြစ်လာမှ ထိန်းချုပ်ဘို့ မလွယ်ဘူး ဆိုပြီး စောစော စီးစီး လော့ဒေါင်း ချတဲ့ အကျိုးကြောင့် အခု မေလထဲ မှာ ကူးစက် ၅၉၅၁ ။သေဆုံး ၁၁၆ နဲ့ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးဖြေလျော့မှုတွေကို သတိနဲ့ ပြန်လုပ်နေပါပြီ ။ တောင်အာဖရိက စစ်တပ်ကလဲ အတော်ပြတ်ပြတ်သားသား အစိုးရကို ဝင်ရောက်ကူညီ ကိုင်တွယ် ထိန်းချုပ်ပေးခဲ့သလို တဖက်မှာ သူ့နိုင်ငံရဲ့ အားကောင်းချက်က စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်တဲ့ လူထု အင်အား ၃သိန်း အဆင်သင့် ရှိထားခဲ့ တာ။ အရင်ကတည်းက အေအိုင်ဒီအက်စ် နဲ့ တီဘီ ရောဂါ ကပ်ဘေးတွေ ကြုံနေခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တော့ စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့တွေက အဆင်သင့်ဖွဲ့ထားပြီးသား ရှိနှင့်တယ် ။ လူထုက -လူထုလှုပ်ရှားမှု အသွင်မျိုး ကို ကျင့်သားရနေတာက မြန်မာပြည်နဲ့ အလားသဏ္ဍာန် တူပါတယ်။ မြန်မာကလဲ နာဂစ်သွေး ရှိတဲ့တိုင်းပြည် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ တိုင်းပြည်ပဲ မဟုတ်လား ။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူး အန်တိုနီယို ဂူတာရပ်စ်က ကမ္ဘာကြီးဟာ ကိုဗစ်ကို ရင်ဆိုင်ဘို့ အတူတူ မလာနိုင်ခဲ့ကြဘူး။ တယောက်ကိုတယောက် တိုင်တိုင်ပင်ပင် ညှိညှိနှိုင်နှိုင်း မလုပ်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ ကိုယ့်ပေါ်လစီနဲ့ ကိုယ်သွားခဲ့ကြတယ်။ တိုင်းပြည်တွေဟာ ကိုယ့် အမြင် နဲ့ ကိုယ်။ ကိုယ့်ဗျူဟာနဲ့ ကိုယ် လုပ်ခဲ့ကြတာမို့ ခုလိုဖြစ်နေတာကို မအံ့သြမိဘူးလို့ ဘီဘီစီ နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပြောပါတယ်။
The world was not come able to come together, and to face Covid19, in an articulated and coordinated way . Each country went with its own policy. Different countries-with different perspectives-and different strategies How to handle covid 19? ( Antonio Guterres UN secretary general at BBC interview )
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကာလဆိုးကြီးတခုကို ကျော်ဖြတ်နေကြတယ်။ တယောက်တပေါက် ကျွန်တော်တို့ ကျော်ဖြတ်နေသလား ။ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်ခဲ့သလား ။ အခုထိ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဆေးပညာရှင်တွေရဲ့ အကြံပေးမှုအောက်မှာ ကိုဗစ်ကို လူထုအားနဲ့ စနစ်တကျ ရင်ဆိုင်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ လူထု အများစု ပါဝင်နေကြတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ လုပ်လက်စတွေကိုချခဲ့ကြ အလုပ်တွေကို စွန့်ခဲ့ကြပြီး အိမ်မှာ ထိန်းချုပ်နေရတာကိုက နိုင်ငံသားတိုင်း ဟာ ကိုဗစ်ကို နိုင်ရာလက်နက် - ရရာလက်နက်နဲ့ တိုက်နေကြတာလို့ မြင်မိတယ် ။
ခွန်ဆိုင်း ( ၂-၀၅ -၂၀၂၀ )
ခွန်ဆိုင်း - ကိုဗစ် ဒိုင်ယာရီ ၃၇ Reviewed by MoeMaKa on 4:00 AM Rating: 5